संसार नागरिक धेरै द्वारा यस अभिनेत्री। इङ्गल्याण्ड को एक देशी, त्यो रूसी भाषा अध्ययन र मास्को थिएटर को प्रदर्शन मा सहभागी, रूस मा एक वर्षको लागि बस्ने, र त्यो विवाह पछि अमेरिकी नागरिकता लागि लागू गरियो। यो एमिली Mortimer गर्ने हो? केही चलचित्रहरू लागि यो दर्शक थाह छ?
प्रसिद्ध ब्रिटिश playwright को छोरी, महोदय, एमिली 1971 मा जन्म भएको थियो सम्मान पुरस्कृत गरियो। त्यो एक बहिनी Rosie र साथ वृद्धि आधा-बहिनी र भाइ लेखक पेनेलोप फ्लेचर आफ्नो पिताको पहिलो विवाह देखि जन्म।
तिनीहरूले एमिली Mortimer मैत्री सम्बन्ध कायम र एक अभिनेत्री बन्न चाहन्थे जो तिनीहरूलाई बीच मात्र थियो। स्कूल थिएटर को चरण मा उनको debut। Mortimer अध्ययन Reychel Vays, एक वर्ष पुरानो थियो र अन्ततः पनि एक प्रसिद्ध अभिनेत्री भइन्। उच्च स्कूल पछि, एमिली ओक्सफोर्ड मा आएको। यहाँ, त्यो भाषाहरूको अध्ययन मा delves। विशेष प्रेम रूसी प्रयोग गर्दछ। यो अवधिमा वयस्कता प्रवेश गर्नेछ जो रूस संग उनको आकर्षण को जन्म, समयमा। एक दिन एमिली रूसी माटो मा हुनेछ। प्रतिभाशाली केटी सिक्ने साथ उपनाम प्रयोग गरेर स्थानीय अखबार मा एउटा लेख लेखे।
यो श्रृंखला 1995 "ग्लास भर्जिन" एमिली Mortimer उपस्थित जसमा पहिलो परियोजना थियो। यो उत्पादन कम्पनी मा देख्यो थियो, र ऐतिहासिक रोमाञ्चक नयाँ भूमिका प्रस्ताव "शार्प गरेको saber।"
को ताराहरु लामो बाटो
नाटक "उच्च राजा को अन्तिम" मा एमिली एक माध्यमिक भूमिका गए। साइट यसको साझेदार इच्छुक अभिनेता Dzhared Leto र Kristina Richchi थाले। Mortimer लोकप्रिय टिभी श्रृंखला देखा पछि "Midsomer Murders।" त्यसै वर्ष उनले कल्पना रोमाञ्चक प्रकाशित "पवित्र।"
1998 सफल ऐतिहासिक टेप को रिलीज जवान बारेमा बताउँछ चिन्ह लगाइएको इङ्गल्याण्ड को रानी। फिल्म "एलिजाबेथ" मा खेल एमिली Mortimer अत्यधिक सानो भूमिका भए तापनि, आलोचकहरु द्वारा सराहना थियो। समग्रमा, बजेट हस्तक्षेप संग तस्वीर को लागि भुक्तानी र केवल "ओस्कार" लिए।
एक प्रमुख चरण Dzhuliey रॉबर्ट्स र Hyu Grantom संग 1999 मा रोमान्टिक कमेडी सहभागी थियो। "Notting हिल" को पुस्तक पसल र प्रसिद्ध चलचित्र तारा मालिक को सम्बन्ध बारेमा बताउँछ। Mortimer मात्र होइन घर मा तर पनि संयुक्त राज्य अमेरिका मा ज्ञात हुन्छ। यहाँ यो पंथ हरर फिल्म "चिच्याउनु" को तेस्रो भाग मा हटाइएको छ। शेक्सपियर खेल्न एक स्क्रिन मिलाइएको "प्रेमको बेकार प्रयासमा" उनको भविष्य पति संग अभिनेत्री परिचय।
थप - थप
2000 मा, Mortimer र Bryus Uillis स्क्रिन जोडी गरे जहाँ शानदार कमेडी "साना केटा", रोलिङ बाहिर। अब देखि, एमिली Mortimer मात्र रोचक परियोजनाहरू प्रस्ताव। उदाहरणको रूपमा, नाटक "सुनको युवा" र "सो शब्दकोश"। 2005 मा, त्यो मा अभिनेत्री Vudi एलन निमन्त्रणा "मिलान बिन्दु।" मुख्य भूमिका आफ्नो नयाँ सरस्वती Scarlett Johansson र Mortimer सीमित तरिका spouses, जो गए पति परिवर्तन। 2007 मा उनले खेल नाटक "रातो क्षेत्र" र रोमाञ्चक प्रकाशित "ट्रांस-साइबेरियन एक्सप्रेस।" त्यसै वर्ष मा, एमिली को Sitcom तीन एपिसोड देखा "30 रक।"
Filmography एमिली Mortimer 90 भन्दा बढी चित्रहरु को कुल छ। को फिलिमहरु "द गुलाबी Panther", "अस्तव्यस्त सिद्धान्त," "सटर द्वीप," "समय Keeper" - उनको सबै भन्दा प्रसिद्ध काम बीचमा। 2011 मा, अभिनेत्री को animated हिट "कार" र एक वर्ष को सफलता को दोस्रो भाग मा वर्ण को एक आवाज दिए पछि नाटक श्रृंखला "समाचार सेवा" मा तारा अङ्कित। 2014 मा, एमिली को कथाहरू मध्ये प्ले, नाटक "रियो, म तपाईंलाई प्रेम" को डाली सामेल भएको छ।
Mortimer ट्रयाक रेकर्ड धेरै प्रमुख फिलिम पुरस्कार समावेश छ। पुरस्कार "स्वतन्त्र आत्मा", त्यो रिबन "Lovely र अद्भुत" प्राप्त, र फिलिम लागि "प्रिय फ्रेंकी," त्यो युरोपेली एकेडेमी लागि मनोनीत भयो।
भूमिकाको एकताबद्ध छैन ...
साधारण जीवनमा, एमिली - सुखी पत्नी। संग Alessandro Nivola तिनीहरूले 2000 परिचित छन्, तर आधिकारिक तीन वर्ष आफ्नो सम्बन्ध formalized। 2003 मा, जोडी पहिलो बच्चा जन्मेको र 2010 मा दोस्रो बच्चा जन्मिएको थियो। बेलायत को एक नागरिक बाँकी हुँदा यस समयमा, एमिली अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गर्दछ।
आकर्षण - प्रकृति को एक उपहार
आफ्नो forties मा, यो महिला कुनै पनि नवोदित तारा नहुनु दिन सक्छन्। प्राकृतिक आकर्षण र atypical उपस्थिति - कि एमिली Mortimer बीच फरक छ। फोटो तारा अक्सर जहाँ त्यो उनको हलिउड सहयोगिहरु साथ प्रशंसक सौन्दर्य र आनन्द को रहस्य खोल्छ चमकदार पत्रिका, को आवरण सजाउनु।
कसले Spock खेल्छ? प्रसिद्ध ठाउँ सागा गर्न प्रसिद्ध धन्यवाद भएका छन् जो अभिनेता
उद्यमीहरूको लागि व्यावसायिक फोटोग्राफी
युनिभर्सल शिकार राइफल "Chezet 550": वर्णन, प्राविधिक विशेषताहरू र समीक्षाहरू
साइटहरु5प्रकार, जो कहिल्यै आउन सक्नुहुन्छ
दिमित्री Varshavsky - एक अभिनेता जो 23 वर्ष मा प्रसिद्ध भए। जीवनी, व्यक्तिगत जीवन, फोटो
सपना व्याख्या: कुन सुई को बारे मा सपना देखिरहेको छ